Iswiidhan: Dalka adduunka ugu wanaagsan ee ay magangalyo doonka ku noolaan karo | Somaliska
Iswiidhan: Dalka adduunka ugu wanaagsan ee ay magangalyo doonka ku noolaan karo
Hey’adaha lakala yiraahdo US News & World Report, ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa cilbaaris ay sameeyeen waxaa ay sheegeen in dalka Iswiidhan uu yahay dalka ugu wanagasan ee ay magangalyo doonka ku noolaan karaan . Hey’adahan ayaa sheegay in dhinacyo badan oo ay ka eegeen ama ay ka qiimeeyeen dalal dhowr ah oo ay xusheen ku tilmaameen in Iswiidhan uu yahay dalka ugu wanaagsan marka la eeggo dhinac kasta la eeggo.
Tobban wadan oo daraasadan lugu qiimeeyey ayaa waxaa ka mid ah dalalka Jarmalka, Kanada, Aawstareeliya, Noorweey, Mareykanka, Finland, Iswiitserlaan Deemark iyo Holland. Dalka labaad ee cilmi baaritan xustay inuu yahay dal isna u wanagasan soo galootiga ama muhaajiriinta ayaa ah dalka Kanada oo lugu xasuusto sidda dalkaasi min xukuumad ilaa shacab ay u soo dhaweeyeen qaxootiga Suuriya ee ka soo cararay dalkooda hooyo.
Isku soo wada duuboo Iswiidhan waa dal labaatankii sanne ee ugu dambeeyey magangalyo siiyeey ajaanib aad u farro badan oo u soo hayaamay si ay u helaan nolol ka duwan tii ay dalalkoodii uga soo tageen oo ah deganaansho la’aan siyaasadeed iyo dagaallo ahli ah. Soomaaliyda ayaa sidoo kale ka mid ah bulshooyinkii dalkaan yimid wixi ka dambeeyey burburkii dowladda Soomaaliya ee sanadkii 1991-kii.
Denmark oo dib uga laabaneeysa go’aan ay sharciga kala noqotay qoysas soomaali ah